Nke a bụ Atụmatụ LinkedIn 33 maka Tweet! | Martech Zone
Nke a bụ Atụmatụ LinkedIn 33 maka Tweet!
Fraịde, Septemba 26, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Enweghị ọtụtụ ụbọchị na anaghị m agụ mmelite sitere na LinkedIn, na-ejikọ onye na LinkedIn, na-esonye n'otu otu na LinkedIn, ma ọ bụ na-akwalite ọdịnaya na azụmahịa anyị na LinkedIn. LinkedIn bụ ndụ dị mkpa maka azụmaahịa m - enwere m obi ụtọ na nwelite ahụ m mere na akaụntụ adịchaghị mbụ n'afọ a. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ dị egwu site na iduzi mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọrụ LinkedIn sitere na weebụ. Jide n'aka na ịkekọrịta ndụmọdụ na soro ndị folks nyere nnukwu ozi a!
Ndị na - ekwu okwu ya na ndị na - ekwu okwu ọhaneze ga - ejigide profaịlụ LinkedIn dị egwu iji nwee ohere ikwu okwu, wee wulite ntụkwasị obi nye ndị na - ege ntị. A chịkọtara atụmatụ LinkedIn 33 dị n'okpuru ebe a na mkpụrụedemede 140 ma ọ bụ obere, na-eme ka ọ dị mfe ịme ngwa ngwa site na ndụmọdụ ahụ ma gaa n'ihu na ọrụ dị mkpa nke ịdị na-arụ ọrụ na obodo LinkedIn. Leslie Belknap
Anyị agbakwunyela tweets ndị a ka ị nwee ike click na ha ka ha tweet ha!
Tweet: Tupu ngosi, melite profaịlụ LinkedIn gị; ndị bịara ya ga-enyocha ya iji tụlee ntụkwasị obi gị. @ Ethos3
Tweet: Gbanwee njikọ jikọtara na weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ oku na-aga ime ihe, ọkachasị na profaịlụ ụlọ ọrụ. @EntMagazine
Tweet: Mepụta ndenye maka ọrụ ọ bụla ị rụrụ n'ime aha ọrụ ọ bụla. Ọ dị mma ịnweta ụbọchị mbadamba. @Forbes
Tweet: Kekọrịta ozi dị elu na netwọkụ gị iji mepụta njikọ na-aghọ njikọ aka. @ReidHoffman
Tweet: Ezigbo ogologo maka njikọ ogologo-oge nke LinkedIn bụ okwu 500 ruo 1,200. Ogologo oge maka ndị na-ege gị ntị. @IGIHE
Tweet: Ikwu "Olee otú ị mara onye a" nzọụkwụ. Pịa "Jikọọ" site na nsonaazụ ọchụchọ, kama profaịlụ. @SylvanLane
Tweet: Chọrọ onye ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ ka ị hụ mmelite ọnọdụ LinkedIn gị? Jiri okwu mgbe ị biputere. @HubSpot
Tweet: Abụla okooko osisi. Enwere ike ile profaịlụ gị 5x ma ọ bụrụ na isonyere ma na-arụ ọrụ n'otu. @IGIHE
Tweet: Mgbe ị na-ewebata onwe gị, echela naanị maka onwe gị. Na-emesapụ aka, ezigbo ma lekwasị anya na onye nke ọzọ. @EmmieMartin
Tweet: Na-achọ ọrụ ọhụrụ na LinkedIn? Ekwela ka onye isi gi mara; gbanyụọ mgbasa ozi gị. @CareerOut pụta
Tweet: Ndị ọrụ LinkedIn na-emelite profaịlụ ha mgbe niile na-enweta ọtụtụ ọrụ na-enye karịa ndị ọgbọ na-akpọtụrụ ndị na-ewe ndị ọrụ. @IGIHE
Tweet: Censor onwe gị. Ọ bụrụ na ị gaghị ekwu ya na nyocha ọrụ, ekwula ya na otu njikọ LinkedIn, ma ọ bụ biputere. @Oriegha
Tweet: Wepụta oge iji rụọ ọrụ na LinkedIn. Nyochaa profaịlụ gị, nyochaa mmelite, sonye na mkparịta ụka. @ABAesq
Tweet: Evernote na LinkedIn tinyekọta; hazie kaadị azụmaahịa, ozi LinkedIn, na ndetu ịkparịta ụka n’otu ebe. @Evernote
Tweet: Jiri profaịlụ LinkedIn gị dị ka ngwa ahịa. Tinye obere vidiyo banyere ụlọ ọrụ gị na profaịlụ gị. @Salesforce
Tweet: Tinye uru na otu LinkedIn: kekọrịta ihe ngosi nke ga-amasị ndị otu. @Igihe
Tweet: Profaili nwere foto nwere ike ile 14x anya. Jiri onyonyo ndị ọkachamara nwere ndabere dịpụrụ adịpụ. @IGIHE
Tweet: Zere buzzwords profaịlụ, dị ka: okike, na mkpali. Belata adjective. Mesie ngwaa ike. @AgumagaIzider
Tweet: Ejila ozi ịkpọ oku akpaghị aka: "Ọ ga-amasị m ịgbakwunye gị na netwọkụ ọkachamara m na LinkedIn." @DailyMuse
Tweet: ”LinkedIn achọpụtala na posts 20 kwa ọnwa nwere ike inyere gị aka iru pasent 60 nke ndị na-ege gị ntị pụrụ iche.” @IGIHE
Tweet: Oge kachasị mma iji biputere na LinkedIn: Tuesday na Tọzdee, n'etiti 7am na 9am oge mpaghara. @SocialMediaWeek
Tweet: Mmelite ụlọ ọrụ na ihe oyiyi nwere ọnụego 98% dị elu karịa mmelite na-enweghị onyonyo. @IGIHE
Tweet: Download LinkedIn si jikọọ ngwa; e mere ya ka ọ dị mfe mmepe mmekọrịta ọkachamara. @Jillianiles
Tweet: are bụ onye pụrụ iche. Gwa ya. Jiri isi okwu okike kama itinye aka na aha ọrụ gị ugbu a. @IGIHE
Tweet: Nyere ndị n’enyemaka, atụmanya na ndị nwere ike iso gị chọta gị; jiri isiokwu dị na profaịlụ gị na LinkedIn. @USnews
Tweet: Ọdịnaya LinkedIn na-enyekarị ihe eji eme ihe iji dị na usoro ndepụta. @Ogechi_onyechi
Tweet: Soro ụzọ Dan Pink; ọ nabatara otu post "ndụmọdụ 3 maka ndị na-ekwu okwu Ted" maka usoro ibipụta akwụkwọ LinkedIn. @DanielPink
Tweet: Kwadoro ndị ị na-asọpụrụ. Ziga ozi ekele mgbe mmadụ kwadoro gị. @IGIHE
Tweet: Depụta ahụmịhe afọ ofufo na LinkedIn; 42% nke ndị isi njikwa na-eji ya akpọrọ ihe dịka ahụmịhe ọrụ nkịtị. @IGIHE
Tweet: "LinkedIn iche iche na-enye otu nke kasị mma onwe mbọn ohere ị nwere na-elekọta mmadụ media." @Forbes
Tweet: Na-agba mbọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ gị? Kama ịnwe onye na-ewe gị n'ọrụ, sonye na ndị ọrụ nchịkọta ndị ọrụ LinkedIn. @Nke oge
Tweet: Kekọrịta ọdịnaya mbụ; "A na-elele ọdịnaya ahụ okpukpu isii karịa ọrụ metụtara ọrụ na LinkedIn." @IGIHE
Tweet: Jiri ihe ngosi; Embed SlideShare ngosi na infographics n'ime profaịlụ gị na ogologo ụdị posts. @SMExaminer
Tags: andrey gidaspovntupooonye ọchụnta egokwa ụbọchịdaniel pinkemmie martinUgbolu3EvernoteForbesokpokoroJason millerJay BaerJeff Bullasjillian ilesLinkedInjikọrọ ọnụihe ngosi njikọprofaịlụ njikọAtụmatụ njikọahịa sherpaAzụmaahịaọhụrụ york ugboroReid hoffmanrim deyndị ahịaSocial Media Examinermmadụ mgbasa ozi izusylvan uzo
The 3 Akụkụ nke Okike Okike